Leadership Chrétien de développement Hanangana « auditorium » lehibe hampisehoana ny maha-Malagasy
Roa taona sahady izay no niorenan’ny fikambanana « Leadership Chrétien de développement » eto amintsika, tsy manao pôlitika saingy kosa mikendry ny tsirairay mba hanam-pahendrena sy hahay hifandefitra ka ho afaka hifampihaino sy hifanohana amin’ny fiainana ho fampandrosoana ny firenena.
Potika ny firenena Manetsika ny olony ny fiangonana
Nanao tsindro-paingotra noho ny kolikoly, ny tsy fandriampahalemana, fanaovana ampihimamba ny haino aman-jerim-panjakana,… ny fiangonana tamin’ny alalan’ny FFKM saingy tsy masin-teny sy tsy mba henoin’ny mpitondra.
Aoka izay ny fampiasana telefaonina sy tablety atao solona baiboly sy fihirana any am-piangonana fa aleo ny baiboly sy fihirana no entina rehefa mandeha mivavaka, hoy izy. Mampifantoka kokoa amin’ny fonompoam-pivavahana sy ny toriteny mantsy ny fananana baiboly sy fihirana tena izy fa mety hitarika amin’ny zavatra hafa tahaka ny fandefasana sms, fanaovana facebook ... ny fananana finday na tablety rehefa any am-piangonana. Ny alahady teo ihany dia efa maro ny fitandremana Fjkm no nampita io vaovao io tamin’ny mpino. Samy manana ny fomba fandraisany azy moa ny rehetra. Tao ireo tonga saina ary tena resy lahatra fa marina io fanentanana nataon’ny filohan’ny Fjkm io. Tao kosa ireo mihevitra fa miankina amin’ny fahamatoran’ny tsirairay io fa tsy voatery ho voan’ny fakam-panahy rehefa mitondra telefaonina sy tablety any am-piangonana. Maro tokoa ny olona variana milalao telefaonina rehefa any am-piangonana, indrindra fa ny tanora koa heverina tsy tongatonga ho azy izao resaka izao. Notokanana tamin’ny fomba ofisialy ny faran’ny herinandro teo ny Fjkm Fihavaozana Manjaka Ilafy. Nitarika ny lanonana ny filohan’ny Fjkm Irako Ammi Andriamahazosoa, tany an-toerana ihany koa Atoa Marc Ravalomanana filohan’ny komity fankalazana ny faha-50 taona nijoroan’ny Fjkm. Ny taona 2010 no natomboka ny asa. Goavana tokoa satria misy rihana roa hatreto ary mbola azo akarina aza. Ao ambany rihana kosa no atao fiantsonan’ny fiara. Nanolotra simenitra 1 taonina ho fanampiana tamin’izao asa goavana izao moa Atoa Marc Ravalomanana.